मोटरेबल पुलका लागि बजेट माग - News Of Himalaya, Proud Of Nepal
मोटरेबल पुलका लागि बजेट माग
सञ्चारसेवाको क्षमता बृद्धि गरिने
सुमेरु संबाददाता १८ श्रावण २०७६, शनिबार ०८:१५
चक्रपथको अवधारणा सहित सडक विस्तारको काम गरिरहेको सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकाले हुँगा नदि सहित अन्य खोलाहरुमा मोटरेबल पुल निर्माणको लागि प्रदेश र संघ सरकारसंग आवश्यक बजेट माग गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराँतीको एक टोलीले १ नं प्रदेशका मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई भेट गरि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भईसकेका ५ वटा मोटरेबल पुलका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिदिन माग गरेको छ ।
साउन ९ गते मुख्यमन्त्री राईलाई भेटेको टोलीले गाउँपालिकाको बजेटले डिपिआर तयार पारेको र पुल निर्माणको लागि स्थानीय तहको स्रोतले नभ्याउने भएकाले प्रदेश सरकारले चासो दिनका लागि आग्रह गरेको छ । बजेट व्यवस्थापन सम्बन्धि माग पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री राईले दुर्गम भेगका नागरिकको सहजताको लागि प्रदेश सरकारले सहयोगको आश्वासन दिएको अध्यक्ष किराँतीले जानकारी दिए । गत आर्थिक बर्ष २०७५–७६ को १० लाख बजेटबाट ५ वटा मोटरेबल पुलको डिपिआर तयार पारिएको छ । उक्त डिपिआर माग पत्र संगै बुझाईएको छ ।
गाउँपालिकाले ५ वटा नदि तथा खोलामा पुल निर्माणको लागि संघ सरकारसंग पनि बजेटको माग गरेको छ । साउन १५ गते संघीय सरकारका भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मन्त्री रघुवीर महासेठलाई भेटेर डिपिआरको आधारमा बजेटको व्यवस्था मिलाईदिन आग्रह गरेको छ । भेटमा मन्त्री महासेठले प्राविधिकहरुसंग सल्लाह गरेर बजेटको व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष किराँतीले जनाए ।
गाउँपालिकाले वडा नं ३ स्थित हुगाँ नदि, वडा नं २ स्थित भूवाखोला र फूलवति खोला, वडा नं ३ र ४ को सिमाना भएर बग्ने कोङखो खोला र वडा नं ५ स्थित बुदुम खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणको योजना बनाएको छ । ति ५ स्थानमा मोटरबेल पुल निर्माण गर्न सके मात्र महाकुलुङ चक्रपथले पुर्णता पाउने अध्यक्ष किराँतीको भनाई छ ।
बुङ, छेस्काम, मार्मेकु, गुदेल समाबेश गरि चक्रपथ निर्माणमा जुटेको गाउँपालिकाले सडक विस्तारको ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । बुङबाट शुरु भएको सडक विस्तारको काम पेल्माङ, छेस्काम, मामेर्कु हुदै कोङखो खोलामा पुगेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
महाकुलुङ गाउँपालिकाले छेस्काम र गुदेलमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावर र क्षमता अभिबृद्धिका लागि पनि माग राखेको छ । साउन १ गते टेलिकमका वायरलेस निर्देशनालयका निर्देशक सरोजमान सिं प्रधानलाई भेटेर टावर र क्षमता अभिबृद्धिका लागि माग पत्र बुझाईएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सागर किराँती र पशुसेवा शाखा प्रमुख डा. विर्खराज राई सहितको टोलीले छेस्काम र गुदेलबाट वितरित सेवा टुजीबाट फोरजी बनाउने र १५ मिटर अग्लो टावर निर्माण गर्न माग राखेको हो ।
अहिले छेस्काममा ७ मिटर र गुदेलमा ५ मिटर लग्लो टावरबाट मोबाईल सेवा वितरण गर्दै आईएको छ । आगामी ६ महिना भित्र क्षमता थप र पुर्वाधार निर्माणमा टेलिकम प्रतिबद्ध देखिएको डा. विर्खराज राईले बताए । दिगो ब्याकअप नहुदा र क्षमता कम हुदा महाकुलुङका सर्वसाधारणले बाक्लो रुपमा सञ्चार हैरानी झेल्दै आएका छन् ।